I-resort eyinkimbinkimbi e-Muine Paradise Resort 3 * inikeza amathuba amaningi eholide elilibalekeleyo eVietnam.
Ulwazi olufushane mayelana nehhotela
I-Muine Paradise Resort 3 * inenzuzo enkulu kunezinye izikhungo ezifanayo, njengoba inamabhishi ayo kanye nedamu elihlanzekile langaphandle uma kwenzeka isimo sezulu siwohloka futhi ulwandle luba lukhulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ezweni lanamuhla kubalulekile ukuthi izivakashi zivimbele ukufinyelela kwi-inthanethi engenantambo.
Ukuqapha okukhethekile eMay Paradise Paradise 3 * ikhokhwa ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zikhululekile futhi zikhululekile emakamelweni. Kuze kube sekugcineni, amakamelo afakwe ifenisha ekhululekile, kanye nemishini yasendlini. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuphawula umklamo wangaphakathi we-laconic, olandela amanothi endabuko ase-Asia.
I-Muine Paradise Paradise 3 * inikeza izindawo eziningi ezingqalasizinda ezenza ukuhamba kwabahambi kube lula futhi kungenakulibaleka. Insimu eluhlaza idinga ukunakekelwa okhethekile, kanye nendawo enkulu lapho ungashona khona. Ungahamba uhambo olujabulisayo lokuvakasha noma uhambe ngokuzungezile endaweni ezungezile endaweni yebhayisikili eqashiwe.
Indawo yendawo yokuhlala
I-Muine Paradise Resort 3 * (iVietnam) itholakala ogwini, edolobheni elidumile lase-Mui Ne. Enye yezinto ezikhangayo ezikuleli dolobha yizintabeni ezinhle zehlabathi, ezitholakala cishe ku-5 km ukusuka ehhotela. Futhi, ngemva kokushayela u-20 km, ungavakashela umuzi wasePhan Thiet.
Inombolo yehhotela lokubhuka
Indawo yokubhula i-Muine Paradise Beach Resort 3 * ineamakamelo angu-35 okuzosiza izivakashi. Abavakashi bangazikhethela izindlu ezivela ezigabeni eziningana ezingafani ngobukhulu, imishini kanye nentengo:
I-Superior Double Apartment yikamelo elincane lapho izivakashi zingalala embhedeni womkhulu noma emibhede amabili angashadile. Leli gumbi linikeza umbono omuhle wegadi.
Amakamelo eDeluxe, afana nalawo angaphambilini, anesiphakamiso esikhulu noma isibhangqa semibhede encane. Ngaphezu kokungaphakathi okunethezeka kuyadingeka ukuphawula umbono omuhle kusuka kumafasitela. Ngakho-ke, ezinye zazo ziya echibini, futhi lezo amakamelo ezibiza kakhulu zizovula ngaphambi kokubona okuhle kolwandle.
Enye yezindlela zokuhlala ezihle kakhulu izindlu ezincane ezikhululekile. Ahluke kuphela emhlobiso wokunethezeka, kodwa futhi endaweni. Lezi ziqhingi ezincane ziseduze eduze nolwandle, ngakho uzofinyelela ngokushesha olwandle, futhi njalo unethuba lokujabulela indawo yolwandle.
Izinsiza zezindlu zokuhlala
Ukuze kuqinisekiswe induduzo yezivakashi emakamelweni izinto ezilandelayo zihlinzekwa:
Njengoba kunikezwe isimo esishisayo seVietnam, esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekamelweni yi-air conditioning ngayinye;
Ngenxa ye-TV enephakeji enkulu yeziteshi zekhebula ngeke ukwazi ukukhathazeka uma ufuna ukuhlala egumbini lesimo sezulu esibi;
Ekamelweni ngalinye kukhona ibha encane, ongayigcwalisa ngeziphuzo zakho ozithandayo ngemali eyengeziwe (ungayisebenzisa njengesiqandisisi esijwayelekile);
Kuye ngesigaba sefulethini lakho, indlu yokugezela izobe ifakwe eshaweni noma ibhuku lokugeza;
Kukhona isethi yokugqoka izesekeli nezimonyo, kanye ne-hairdryer.
IVietnam ngoNovemba ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu izivakashi ngenxa yesimo sezulu esishisayo nesomnene. Ngakho-ke, ukugeleza kwabahambi ngalesi sikhathi kwandisa ngokumangalisayo, futhi abaningi bakhetha ukuhlala kuleli hotele. Ukubuyekezwa ngaye kuhle kakhulu, kodwa kuboniswe ngamazwana alandelayo:
Ukubhaliswa nokuhlala kwezivakashi ngezibalo kwenziwa masinyane, ngaphandle kokuhleleka nokuzilibazisa okungenasici;
Umzuzu omuhle wukuthi isivakashi ngasinye efulethini lilindele inothi elamukelekile elibhekiswe kuye ngokwakhe ekuphathweni kwehhotela;
Naphezu kokuthi umhlobiso wamakamelo ehhotela unama-laconic futhi unesizotha, kukhona konke okudingekayo ukudala imvelo ekhululekile, futhi ujabulele ukuhlanzwa kwekhwalithi ephezulu, eyenziwa nsuku zonke;
Amantombazane agcwaliswa nsuku zonke emakamelweni ngamanzi okuphuza, kanye nezikhwama zetiyi kanye nekhofi;
Ukushiswa kombhede kwenziwa kaningi njengoba ufuna (vele ushiye uphawu olukhethekile embhedeni ngesidingo sokunikeza le sevisi);
Ama-Breakfasts asemqoka kakhulu, futhi agcinwe emgodini ovulekile, ovumela izivakashi ukuba zijabulele ama-panorama ezungezile, futhi zidlala umculo omnandi ophilayo;
Naphezu kokuthi insimu ye-resort complex isincane kakhulu, inhle kakhulu futhi isitshalwe kakhulu ngemifino kanye nazo zonke izinhlobo zezitshalo ezingavamile;
Ichibi liyisimo esifanele - lihlanzwa njalo, futhi amanzi awanakuthenga i-chlorine noma amanye amakhemikhali;
Enye yezinzuzo eziyinhloko ingacatshangwa ukuthi insimu yehhotela ivaliwe, kodwa ngenxa yokuthi awukwazi ukusinda ukuthi othile uyongena;
Indawo yokudlela iyinambitha kakhulu, futhi amanani ayithengi kakhulu.
Ngaphezu kwezikhathi ezinhle, kunezici ezimbi zokuzilibazisa ku-Muine Paradise Resort 3 *. Ukubuyekezwa mayelana nale ndawo yokubhuka kufaka phakathi amazwana angamanga, amazwana, kanye nezimangalo:
Ihhotela lide kakhulu nesikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele (cishe amahora angu-6 ukuhamba), okuyinto ephosa kakhulu ngemva kwendiza ende;
Izindwangu efulethini, ngokusobala azizange zigeze esikhathini esidlule, noma zisebekhulile kakhulu, ngoba zinezindawo ezimbi;
Ebhishi udinga ukwehla emthambekeni osenyakatho phansi ezitebhisini, okudala ubunzima obunzima lapho ubuyela ehhotela;
Ngenxa yokuthi ulwandle alunamathele, luletha njalo olwandle inqwaba yama-algae ne-jellyfish ehlaba ubuhlungu;
Naphezu kokuthi ibhishi liyimfihlo, kuvame ukuthi abadobi bendawo bafike ngezikebhe nazo zonke izinto zabo, ngenxa yalokho abakwazi ukugibela nokushisa;
Uma ukhiye ulahlekile, imali ephakeme kakhulu ikhokhiswa - okungenani i-$ 35.
Usuku lomsebenzi womgwaqo ungomunye wamaholide obalulekile kunazo zonke eRussia
Ngubani Tatiana Kiosya?